မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: ဒုက္ခနဲ့ သုခကြားက ကြိုးတံတား
လူတိုင်းမွေးလာကတည်းက ဖြူစင်မှုနဲ့အတူမွေးဖွားလာပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖြူစင်မှုကို အရောင်မျိုးစုံ စိုးပေးတာက မိသားစုနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ ဒုက္ခတစ်လှည့် သုခတစ်လှည့်စီရှိကြပါတယ်။ အမြဲတမ်းလည်း ဒုက္ခမှာမရှိဘူး။ အမြဲတမ်းလည်း သုခမှာမရှိပါဘူး။ အဲဒါကိုမမြဲတဲ့ သင်္ခါရ တရားလို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒုက္ခရောက်နေချိန် (သို့) ရည်မှန်းချက်ကြီးနေချိန်တို့မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တာ ထက်လိုအပ်ချက်တွေကပိုများနေခဲ့ရင် အဲဒီအချိန်မှာ သမာအာဇီဝဆိုတာ မိမိထံမှပျောက်ကွယ် သွားတတ်ပြီး လူ့စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတွေ စာရိတ္တပျက်ပြားမှုတွေက မိမိဘဝမှာ ကြီးစိုးလာနိုင်ပါတယ်။ မိမိအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်သူများပိုင်နက်ကို ကျူးလွန်မှု သူများပိုင်ကို ခိုးဝှက်မှု လိမ်လည်မှုတို့နဲ့ မိမိသမိုင်းကို ညစ်ထေးစေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာ ဘယ်တရားကဘယ်လိုဘဲဆုံးမ ဆုံးမ မိမိအလိုတော်နောက်ကို လိုက်ရင်း ဘုရားတရား သာသနာကဆုံးမမှုကို ဥပေက္ခါပြုမိပြီး မိမိစိတ်ကူး၊ မိမိဆန္ဒကိုသာ ကိုးကွယ်နေတတ်ကြပါတယ်။
တကယ်မှာတော့ ရဇ္ဇကီဆိုတာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဆီက လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ချို့တဲ့မှုကြောင့် သူများဆီမှာဒူးထောက်ပြီး ရှရစ်က် လုပ်စရာလည်းမလိုပါဘူး။
သည် အာယာ့သ်တော်ကိုသာ အမြဲသတိရနေဖို့လိုပါတယ်။
Quran (35:1) inn Allaha Ala kulli shai in Qadir.
No doubt only Allah is able to do all things.
လူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများရဲ့ အကုသိုလ်အလုပ်တွေကို မြင်ပေမယ့် ကိုယ်အမုန်းခံရမှာစိုးလို့ မပြောရဲ မဆိုရဲခေါင်းရှောင်တဲ့ လူတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်။ လက်ညှိုးထိုးရင်မလွတ်ကြပါဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒီလိုလူတွေဟာ မိမိကိုယ်ကျိုးကို ကြည့်တဲ့ လူတွေထဲက လူတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအမုန်းခံရမှာစိုးလို့ သူများကို မိမိအစားအမုန်း ခံခိုင်းတာလည်းရှိကြသေးတယ်။ အကုသိုလ်အလုပ်ကိုမမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပေးတဲ့လူက အကုသိုလ်ကျူးလွန်သူတွေအတွက် ချစ်မျိုး ချစ်ဆွေ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ သူများအကုသိုလ်အလုပ်ကိုမြင်လို့ မိမိအမုန်းခံရမှာမမှုဘဲ သတ္တိရှိရှိထောက်ပြတယ်၊ သွန်သင်လမ်းပြတဲ့လူက အမြဲအမုန်းခံရတတ်ပါတယ်။ အချို့ လူမှန်နေရာမှန်မှာ ရပ်တည်ချင်တဲ့ သူတို့ဘဲ အဲဒီလိုသွန်သင် လမ်းပြမှုကိုဝမ်းသာစွာနဲ့လက်ခံကြတယ်။
လူ့အိမ်ထောင်စုကြီးထဲမှာ တကယ်တမ်းမြင်သမျှတွေ့သမျှကို စကာမှာထည့်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တကယ့် လူတော် လူကောင်း လူမှန်ကလက်တစ်စုတ်စာလောက်ဘဲရှိတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ အမှားကိုမျက်စိပိတ် မသိချင်ယောင်၊ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အမှန်ကိုမျက်နှာလွှဲထားကြတယ်။ အချို့လူကြီးများ၏ မိုက်မဲမှုကြောင့် ဘဝရင့်ကျက်မှုမရှိသေးတဲ့ လူငယ်တွေက လူကြီးများလုပ်ခဲ့သမျှ ဒဏ်ကိုခံကြရတယ်။ အရင်ခေတ်က သားသ္မီးမကောင်း မိဘခေါင်း၊ ဒီခေတ်မှာတော့ မိဘမကောင်း သားသ္မီးခေါင်းဖြစ်နေတာ အတော်များများကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရဦးမှာက ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်း။
လူတွေမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရင့်ကျက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ထားချင်း ကွာခြားကြတယ်။ မိဘနဲ့ သားသ္မီး၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေတောင် ရင့်ကျက်မှုအဆင့်ဆင့်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး စိတ်ထားချင်းလည်းကွာခြားကြတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘ၊ သားသ္မီး ညီအစ်ကို မောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်းများ စိတ်နေစိတ်ထားမတူညီတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရင့်ကျက်မှုအားနည်းနေရင်တော့ ဘေးကလူ အမှားလုပ်လုပ်၊ အမှန်လုပ်လုပ် သေခြာခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိသေးပါဘူး။
ဘာမဆို ကိုယ့်လုပ်ရပ်မှာ လိပ်ပြာသန့်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်လုပ်သမျှက ကိုယ့်ရာဇဝင် ကိုယ်ရေးနေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရာဇဝင်လှဖို့လိုတယ်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက် မဟုတ် မမှန်တာလုပ်နေရင် အားနာမှု၊ သနားမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ မပြောရဲ မဆိုရဲရင် အဲဒီလူကို ဒုစရိုက်လုပ်ဖို့ ဆက်အားပေးနေတာနဲ့တူတယ်။ ဒါပေမယ့် သတ္တိရှိရှိနဲ့ ထောက်ပြပြီး သမာအာဇီဝကျဖို့၊ သည်းခံတတ်ဖို့ စာရိတ္တကောင်းမွန်ဖို့ ဖေးမကူညီလမ်းပြပေးရင် လူတစ်ယောက်ကို လူ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြှင့်တင် ပေးတာနဲ့တူတယ်။ ဒါမှ မိတ်ရင်း ဆွေရင်းဖြစ်ပါတယ်။
သုခတစ်လှည့်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီသုခဟာ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ရတဲ့ သုခဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူတစ်ပါးဒုက္ခအပေါ်မှာ မတရားမှုနဲ့ရလာတဲ့ သုခမျိုးမဖြစ်စေဖို့ သတိထားရပါမယ်။ လူမှာရင့်ကျက် မှုရှိဖို့လိုတယ်။ လူမှာရင့်ကျက်မှုရှိဖို့အတွက် ပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝရတယ်၊ သည်းခံတတ်ရတယ်၊ စည်းကမ်းကိုစောင့်ထိန်းတတ်ကြမှ သန့်ရှင်းတဲ့ သုခဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ အဲတော့မှ စိတ်သန့် ကိုယ်သန့် ရာဇဝင်သန့်ပြီး ရလာတဲ့ ဆုလဘ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ ဒုက္ခနဲ့ သုခကြားက ကြိုးတံတားကိုတော့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့လျှောက်ကြဖို့ မေတ္တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ordinary person at 9:43 PM